#health #shwechat #yym #weightloss #mental_note
ShweChat ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်သူတွေလုပ်ထားပြီ ဘယ်တုန်းကစဖန်တီးခဲ့တာလဲ?
ရွှေချက်ဆိုတာ မြန်မာတွေလုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဆိုရှယ်နက်ဝက်ပလပ်ဖောင်ဖြစ်လို့ မြန်မာ့ဖေ့ဘွက်လို့ပြောရင် မမှားပါဘူး။ ဝါသနာအရ IT နည်းပညာများကိုလေ့လာရင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။
လက်ရှိအကျွမ်းတဝင်အသုံးပြုနေတဲ့ ဖေ့ဘွက်လိုဖြစ်လို့ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် အကောင့်ဖွင့်ရာမှာလည်း ဂိုဂယ်နဲ့ ဖေ့ဘွက်အကောင့် တခုခုကို သုံးပြီး အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရပါတယ်။
စာနဲ့ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို တွေအပြင် mp3 သီချင်းတွေနဲ့ pdf file တွေပါတင်လို့ရလို့ mp3 သီချင်းတွေသိမ်းထားနိုင်သလို ebook pdf တွေတင်ထားပြီး အချိန်မရွေး ပြန်ဖတ်၊ နားထောင်နိုင်လို့ ပိုမိုအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ကာကွယ်မှုများဖြစ်တဲ့ Data Security ကို တိုးတတ်ပြောင်းလည်းနေတဲ့ နည်းပညာများနဲ့ အမြဲပြုပြင်ထည့်သွင်းနေလို့ လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ အထူးလိုအပ်တဲ့ မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ Personal Data များကို ဖေ့ဘွက်နည်းတူ ပြုလုပ်ထားလို့ မိမိလိုအပ်သလို Account Settings ကနေ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အကောင့်လုံခြုံရေးကတေ့ ဖေ့ဘွက်လိုပဲဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ Username/Password တွေကိုအခြားသူများကို လုံးဝ(လုံးဝ) ပေးမသိရပါဘူး။
App နာမည်ကဘာလဲ? Android / iOS နှစ်မျိုးစလုံးရပြီလား?
App နာမည်က ShweChat လို့ခေါ်ပြီး အဲဒီနာမည်ကို Play Store မှာရှာလို့ရသလို ဒီလင့်ကနေ Click here Install လုပ်လို့ရပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် Android version ပဲရသေးပြီး iOS version ကိုလည်း အမြန်ရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ iOS အသုံးပြုများအနေနဲ့ Website version မှာ အသုံးပြုပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Website version ကို Mobile တွေအတွက် အထူးဖန်တီးထားလို့ အသုံးပြုရတာ တော်တော်ဆင်ပြေစေမှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်မျိုးမဆို လေးစားစွာကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီ Platform လေးပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ထက် ကောင်းမွန်အောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါဦးလို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါ။